Puntland oo ka falcelisay warkii Gudoomiyaha Aqalka Sare | Universal Somali TV
Puntland oo ka falcelisay warkii Gudoomiyaha Aqalka Sare
Puntland ayaa waxay ka digtay in shuruucda dalka loo adeegsado dano gaar ah, iyadoo loo maraayo habraacyo aan waafaqsanayn dastuurka ku-meel-gaarka ah ee dalka.
Warsaxaafadeed ay goor dhow soo saartay Puntland ayay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay inaanan la tix-gelin is afgaradkii 22-kii bishan ka soo baxay kulankii foggaan araga, ee ay yeesheen Madaxda Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada, kuna aadanaa in la joojiyo doodda Golaha Shacabka ee ku aadan sharciga doorashada.
"Dowladda Puntland waxay ka walaacsan tahay inaan la tix-gelin is afgaradkii lagu gaaray kulankii maqal aragga ahaa, ee ay yeesheen Madaxda Dowladda Federaalka iyo Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, oo dhacay 22 June, 2020, kaasoo ahaa in la joojiyo doodda Golaha Shacabka ee la xiriirta sharciga doorashooyinka." Ayaa lagu yiri warsaxaadadeedka.
Puntland ayaa warsaxaafadeedka ku sheegay in lagu dhiiranayo been abuur iyo is daba-marin, sida cad baa warsaxaafadeedka lagu yiri warqadda Gudoomiyaha Aqalka Sare.
"Dowladda Puntland waxay ka digaysaa in shuruucda wadanka lagu saleeyo damac-gaar ah iyo rabitaanka madaxda dalka, iyadoo loo marayo habraacyo aan waafaqsanayn dastuurka ku-meel gaarka ah, laguna dhiirranayo been-abuur iyo is daba-marin sida ku cad warqadda Guddoomiyaha Aqalka Sare." Ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Kan-xigaFarmaajo oo shacabka Soomaaliyeed u d...
Kan-horeJubbaland oo walaac ka muujisay dooda...
54,018,589 unique visits